Radio Don Bosco - Tenin'ny Tompo
Hitoetra ao amin’izany trano izany ny fiadanana lazainareo
Nosoratan'i Ranaivoarisoa Jean Philippe
Naseho ny : 3 jolay 2022
Alahady 3 jolay 2022 — Alahady fahefatra ambin'ny folo mandavantaona — Hankalazaina anie ny Mpanjaka avy, amin’ny Anaran’ny Tompo ! Fiadanana anie any an-danitra ary voninahitra anie any amin’ny avo indrindra — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 10, 1-12. 17-20
Moa mahazo misaona va ny olona raha mbola eo ny mpampakatra ?
Nosoratan'i Rafaralahimboa Justolat Eulethère
Naseho ny : 2 jolay 2022
Zoma 2 jolay 2022 — Herinandro fahatelo ambin'ny folo mandavantaona — Niteraka antsika an-tsitra-po tamin’ny tenin’ny fahamarinana Izy, mba ho santatry ny zava-boaariny isika — Evanjely Masina nosortan'i Masindahy Matio 9, 14-17
Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody; ary ny famindram-po no sitrako fa tsy ny sorona
Naseho ny : 1 jolay 2022
Zoma 1 jolay 2022 — Herinandro fahatelo ambin'ny folo mandavantaona — Ny ondriko mihaino ny feoko, hoy ny Tompo; Izaho mahalala azy ary izy manaraka Ahy — Evanjely Masina nosortan'i Masindahy Matio 9, 9-13
Nankalaza an’Andriamanitra ny vahoaka noho Izy nanome fahefana ny olona toy izany
Naseho ny : 30 jona 2022
Alakamisy 30 jona 2022 — Herinandro fahatelo ambin'ny folo mandavantaona — Fanilo ho an’ny tongotro ny teninao, ry Tompo, ary fanazavana ny lalako — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 9, 1-8
Pejy 1 amin'ny 223